प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको दसैं कस्तो भो?
सुन्दर खनाल काठमाडौं - शुक्रबार, कात्तिक १४, २०७७
तपाईंको दसैं नरमाइलो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
तपाईं त्यसै त बिन्दास प्राणी हो। कुनै विषयलाई आफ्नोपनको बुझाइमा ढाल्ने, त्यसलाई विज्ञानको अलौकिक आविष्कारबराबरको मौलिकता दिएर प्रस्तुत गर्ने, त्यसैलाई अझ हास्यरसको अभिषेकबाट सुगन्धित तुल्याउने अपूर्व कला तपाईंको ‘तेजतर्रार’ वृत्तिसँग निःसृत छ। तपाईंको हथौडी नै यही हो। र, यसैबाट गरिखानु भएकै पनि हो।
यस्ता मनुवालाई सधैं दसैैं।
के जाति के–के गर्नुभो, कति वर्ष जेल पर्नुभो, दुःख पाउनुसम्म पाउनुभो, स्वास्थ्यले पनि तपाईंलाई नै दिनुसम्म दुःख दियो। तर, ती सारा चिजले पनि तपाईंलाई हराउन सकेनन्। यो देशको दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो।
तपाईंको बाल्यकाल कति कष्टसाध्य थियो भन्ने पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ। तपाईंले औपचारिक शिक्षालाई चाँडै नै तिलाञ्जली दिनुपरेको पनि एउटा सहानुभूतिजन्य किस्सा हो।
यावत् खिलाफ तपाईंको आत्मबल, फुर्ति, स्वअध्ययन–सबका सब एकसेएक अनुकरणीय पक्ष हुन्।
यस्तो मान्छेका लागि खासमा जीवनका बाँकी हरेक दिन दसैं वा सोसरह हो।
तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, माथिका १ सय ३२ शब्द तपाईंको स्तुतिका लागि लेख–आरम्भमै हवन गरिएका होइनन्। मात्र स्मरण गराइएको हो।
वास्तवमा अहिले लाग्दैछ, तपाईं आफ्नो बलियो पक्षबाट लाखौं प्रकाश–वर्ष टाढा भइसक्नुभयो। र, आसुरी भामरीमा परेर एउटा ‘ब्ल्याकहोल’ मा छिर्दैछ तपाईंको राजनीतिक विरासत। तपाईंसँग अब बाँकी भनेका करिब–करिब यिनै हुन्– हठ, उदासिनता, लोभ, भेद र विनाश शक्ति। यी घातक अवगुण मुखेन चानचुन दुई वर्षको कार्यावधिमा तपाईंले नेपाली जनतालाई कस्तो दुर्भिक्षमा जाक्नुहोला भनेर भनिहाल्न गाह्रै छ।
दसैं कस्तो भयो भन्ने प्रश्नको अर्कै महत्व हुन्थ्यो, यदि कोरोना महामारीमा जनता बचाउनुपर्ने दायित्वबाट तपाईंले हातखुट्टा नझिकेको भए। नेपाली जनताले के खाए, के लाए, औषधोपचार के भयो, अस्पतालमा बेड पाए–पाएनन्, अक्सिजन दिइयो–दिइएन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था के–कस्तो छ, खर्च कसरी जुटाए, घरमा चुल्हो बल्यो–बलेन, कामधन्दा के भयो भनेर तपाईं र तपाईंको सरकारले यो दसैंभर कति टाउको दुखाउनुपर्‍याे होला भन्ने स्वाभाविक अनुमानमा यी प्रश्न गरिएका हुन्थे। यी प्रश्नमा तपाईंप्रतिको अगाध सम्मान जोडिएको हुन्थ्यो। र, उत्तरमा तपाईंले सायद ‘दुर्गाभवानीको आशिषले जनताको समस्यासँग लड्ने अदम्य तागत दिएको’ भन्दै विनम्रता प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो।
त्यसैले, जसरी सुरुमा यो प्रश्न नै स्वउत्तरित छ भनेर व्याख्या गरियो, अहिलेको तपाईंको अघोर राजनीतिक पतनको अवस्थामा पनि यो प्रसंगवरपर कुनै उहापोह छैन।
अर्थात्, आजसम्मको राजनीतिक प्राप्तिले तपाईंलाई यति अभिमानी बनाइदियो कि कुनै पनि नैतिक प्रश्नसामु तपाईंको छाला गैंडाको भन्दा बाक्लो बनाइदिइसकेको छ। नैतिक प्रश्नले त मानिसलाई फर्सी गलाए झैं गलाउँछ। उसका दसैं बिग्रिन्छन्। उसका लागि दिनमै रात पर्छ। मुख देखाउन लाज हुन्छ- घरदेखि लोकसम्म।
एउटा अपांग भिखारी बाउले बच्चाबच्चीको नैतिक प्रश्न आगे दिनभर रत्नपार्कमा हात फैलाएको देख्नुभएको होला नि? एउटी परित्यक्त आमाले लालाबालाको मुखमा माड लगाउन देह बेचेको कहानी सुन्नुभएको होला नि? तपाईंले चाहिँ नैतिक प्रश्न सुन्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? दसैं कस्तो भयो भन्ने प्रश्न तपाईंको शीरमा ‘जुरेको पहिरो’ झैं बज्रियो कि बज्रेन?
हेर्नोस्, यो प्रश्न गर्नुपर्ने धेरै आधार छन्। साथै, तपाईं हठ–उदासिनता–लोभ–भेद–विनाश शक्तिमा डुब्नुभयो भनेर भन्नुपछाडि ठूलो प्रमाणित तागत छ।
भन्नोस्, तपाईंसँग के थिएन? नेपाली जनताले दसैंका बेला तपाईंलाई धिक्कार्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तपाईंलाई केले बाटो छेक्यो? शेरबहादुर देउवाले त पक्कै होइनन्, उनी त बरा तपाईंले दिएको चिया–बिस्कुटमै रमाएका छन्, आउने महाधिवेशनमा सके तपाईंकै बक्सिस कुर्ने होलान्। तपाईंकै नेताले काम गर्न दिएनन् कि? ती त तपाईंकै कालाजादुमा रंगमंगिएका छन्। भारतले केही गर्‍याे कि? भारतलाई आफ्नै समस्याले घाँटी–घाँटी पारेको छ। थोडी, नरेन्द्र मोदीलाई तपाईंकै मात्र रिस गरेर बस्ने फुर्सद छ। उनले त तपाईंले अरण्य रोदन गरेपछि ‘रअ’ प्रमुख पठाइदिए पनि। अनि, देवदूतसँग भेटे झैं विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिणले चलाएको मान्नुहुने भ्रातृ नेताहरूलाई खुच्चिङ गर्नुभो।
तपाईं इतिहासले राजनेता बन्ने दुर्लभ अवसर दिएको नेता। तपाईंले शासनसत्ता चलाउनन्जेल नेपालीका दसैं गजबका हुनुपर्ने थिए। मोजले गजबका नभए पनि समभाव, करुणा, न्यायनिष्ठा र भविष्यप्रतिको भरोसाले आनन्ददायक बन्नुपर्ने थिए।
अलिकता स्मरण गराउँ है। दसैंअघि तपाईंले जम्माजम्मी चार महिना ‘लकडाउन’ गर्नुभयो। तर, लकडाउन कोरोना नियन्त्रणका लागि थियो भनेर प्रमाणित गर्ने एउटै विश्वासिलो प्रमाण के छ? : त्यही केही अर्ब खर्चको फेहरिस्त, केही थप प्रयोगशालाको सूची? सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले कर्तव्यबोधबाट गरेको मेहनत, सुरक्षाकर्मीहरूको स्वस्फूर्त अहोरात्र खटाइका लागि तपाईंका भाषण लेखकहरूले तयार गरेको निर्देशन नै जरुरी थिएन। यी त सधैं कसैले केही नभनी भिडेकै छन्।
पहिलो तीन महिने र दोस्रो एक महिने लकडाउनमा तपाईंको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक तमासालाई जनमतमाथिको जघन्य अपराध भन्दा हुन्छ। तपाईंले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएको ‘म्यान्डेट’ सामु कुनै नेताको भाग खाने दाउले केही दाल गलाउनेवाला थिएन। तपाईंको कोरोना नियन्त्रणप्रतिको चेष्टा ठिक ठाउँमा हुन्थ्यो भने ओम्नी प्रकरण नै काफी थियो। तर, आफ्ना प्याधाहरूको संरक्षणखातिर यो प्रकरणलाई तपाईंले कालकुटसरह पचाइदिनुभयो। तपाईंले आजका दिनमा नयाँदिल्लीसँग यति याचनाशील बन्नुपर्ने थियो त हिजैका दिनमा खुला सीमालाई चरम निगरानीमा राख्ने व्यवस्था किन गर्नुभएन? तपाईं एकातर्फ राष्ट्रियताको डम्फु बजाउनुहुन्छ, अर्कातिर भाइरस छिराउन महिनौंसम्म बोर्डर खुला राख्नुहुन्छ। आज जनताको खल्ती टक्टक्याउन निजी क्षेत्रलाई दिनुभएको पिसिआर जाँच अलि पहिल्यै सीमाका ठाउँ–ठाउँमा राखिदिएको भए के हुन्थ्यो? ठेकेदारबाट घेरिने ईश्वर पोखरेल, भारदारी बुद्धिमा हुर्केका भानुभक्त ढकाललाई भाइरससँग लड्न पठाएर तपाईं बालुवाटार रिट्रिटमै रम्नुभयो। गर्नुपर्ने काममा चित्त गएन।
तपाईंलाई थाहा छ कि छैन– तपाईंले संसदबाटै दिएको अतिलापर्वाहपूर्ण सल्लाहमा लाग्दा धेरै मानिस अहिले अक्सिजनसमेत नपाएर मरिरहेका छन्। बेसार र हाच्छ्युँको यो प्रेस्क्रिप्सन तपाईंका सल्लाहकारका हकमा लागू भयो कि भएन? तपाईं विज्ञानलाई चुनौति दिने कस्तो विद्याबाट दीक्षित हुनुभएको हो, आफैं जान्नुहोला।
हेर्नोस्, अहिले तपाईंका भारदार, मन्त्रीको सान्निध्यमा रम्नेहरूका लागि पनि दिनहुँ दसैं छ। उनीहरू पुस्तौं सुतिसुती खान पुग्ने गरी कमाउने मेलोमा लागेका छन्। तपाईंले पर्याप्त समय पाएर पनि सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रलाई कोभिड उपचारनिम्ति प्रयोग, स्तरोन्नति नगर्दाको परिणाम घरघरै आगो झैं दन्किरहेको छ। मानिस तपाईंका दलका नेता, तिनीहरूनिकट डाक्टर, मेडिकल व्यवसायीको सोर्स लगाएर मात्र बेड पाउने अवस्थामा छन्। त्यो पनि जीवनै बचाउने गुन लगाइए झैं। र, हजारौं मानिस निजी अस्पतालहरूलाई पिसिआर नेगेटिभ आउन्जेलसम्म तिसौं लाख तिरेर नांगेझार भएका छन्।
तपाईंले यी कुनै घटनाक्रमलाई नदेखे झैं गरिरहनुभएको प्रमाण हो, दसैंको मुखमा सामन्त गोयललाई दिइएको मेजमानी। प्रधानमन्त्रीको हरेक मिनेटको विवेक र निर्णयले लाखौ जनताको ज्यान बच्छ भन्ने ज्ञानको स्रोत तपाईंको विगतमा खोज्नु बेकारै हो। तै पनि, कहिलेकाहीं त आश लाग्छ। तपाईंले चाहे नहुने के छ? अबका दुई वर्ष तपाईंले कार्यकर्ता पाल्न कनिका छरे झैं बजेट नछरे पनि, नन्दिभृंगीलाई ठेक्कामा अर्बौं मुनाफा गराउने टेन्सनमात्रै नलिए पनि नेपालीहरूलाई सिटामोल, तातोपानी र अक्सिजनको जोहो हुनसक्छ। त्यतिमात्र गर्दे पनि तपाईं इतिहासकै सबैभन्दा महान प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। तपाईंका हजार खत माफ हुन्छन्। श्वास जाने बेला नारायण भन्न सके पाप कट्टा हुने ठान्ने नेपालीले तपाईंकै जयजयकार गर्छन्। अनि, तपाईंलाई फेरि दसैं कस्तो भयो भनेर सोध्न जरुरी हुने छैन।